2 Ụzọ naghachi iPhone Data Lost mgbe Iweghachi ka Factory Ntọala
> Resource> iPhone> Olee naghachi iPhone Data Lost mgbe Iweghachi ka Factory Ntọala
Mkpa naghachi iPhone data mgbe weghachi!
d My iPhone wee banye mgbake mode mgbe mgbalị iji kwalite ka iOS 9. Iji nweta ya nke mgbake mode, m nwere iji weghachi ya ụlọ ọrụ ntọala. Otú ọ dị, ndị niile data m nwere furu efu. Enwere ụzọ iji nweta m iPhone data azụ?
General na-ekwu okwu, mgbe ị ihichapụ data gị iPhone, ọ na-adịghị ruo mgbe ebighị ebi ozugbo, ma naanị-aghọ-adịghị ahụ anya na e nwere ike overwritten site ọhụrụ ọ bụla data. Dị ka ka Iweghachi iPhone ka ụlọ ọrụ ntọala, ọ bụ obere ike, n'ihi na data nwere ike a overwritten n'oge na-eweghachiri. Ọ na-ada-agaghị ekwe omume na-agbake data si iPhone mgbe ụlọ ọrụ mmepụta ihe mwube weghachi. N'ezie, e nwere ka a ohere. Ihe niile ị chọrọ bụ ihe iPhone data mgbake ngwá ọrụ. N'okpuru ebe a bụ 3 mfe ụzọ naghachi iPhone data mgbe weghachi.
I nwekwara ike lelee isiokwu n'okpuru dị ka ụdị nke faịlụ mkpa ka ị naghachi:
Naghachi ozi ederede site na iPhone >>
Naghachi furu efu foto site na iPhone >>
Naghachi furu efu kọntaktị site na iPhone >>
Naghachi iPhone data furu efu mgbe ụlọ ọrụ mmepụta ihe mwube weghachi!
Wondershare Dr.Fone Maka iOS (iPhone Data Recovery)
* Weghachite data si iOS ngwaọrụ, iCloud nkwado ndabere na mpaghara iTunes ndabere (gụnyere ezoro ezo otu).
* Naghachi iPhone kọntaktị, ozi, ndetu, na-akpọ ihe mere eme, photos, video, na na.
* Ò Kwekọrọ n'Ozizi na ọhụrụ iOS 9 ma na-akwado iPhone 6s ( Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS
* enwetaghachi data furu efu ruru nhichapụ, ngwaọrụ ọnwụ, jailbreak, iOS 9 nweta nkwalite ma ọ bụ ụlọ mmepụta ihe mwube weghachi.
Nkebi nke 1: Wepụ iTunes ndabere iji weghachite Previous Data na Lost Data
Part 2: Download na ike iṅomi iTunes naghachi Previous Data
Soro nzọụkwụ n'okpuru:
1. Gbaa usoro ihe omume ma họrọ "naputa site na iTunes ndabere File".
2. Họrọ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ site na ndepụta egosipụta Dr.Fone, na pịa "Malite iṅomi" iji nweta ya amịpụtara.
3. Mgbe iṅomi akwụsị, ị nwere ike ịhụchalụ na selectively naghachi ihe ọ bụla ihe ị chọrọ n'aka Doppler N'ihi gị na kọmputa. Ọ na-nwere ike mere otu Pịa.
Cheta na: N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ọ bụghị naanị naghachi data ẹdude ke iTunes ndabere, kamakwa naghachi ndị ehichapụ data, nke ike-weghachiri eweghachi kpọmkwem site iTunes gị iPhone.
Part 2: Download na ike iṅomi iCloud naghachi Previous Data
1. Gbaa usoro ihe omume ma họrọ "naputa site na iCloud ndabere".
2. Abanye gị iCloud akaụntụ. Họrọ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ ịchọrọ ibudata ma wepụ ya.
3. Ego nkwado ndabere na mpaghara ọdịnaya na nne Mmetụta naghachi ihe ị chọrọ ka gị na kọmputa.
Cheta na: Ọ bụ kpam kpam mma abanye na gị iCloud akaụntụ na ibudata na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ. Dr.Fone Ghara ịnọgide na-ọ bụla ndekọ nke ozi gị na data. Ebudatara faịlụ bụ naanị zọpụta na gị onwe gị na kọmputa na ị na-nanị otu onye ka ohere.
Cheta: Ọ bụrụ na ị na-eji a Mac, na-eji Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) na-arụ ọrụ yiri nzọụkwụ dị ka n'elu. Ọzọkwa, i nwere ike iji Wondershare TunesGo mbubata gị photos, video na kọntaktị gị iPhone effortlessly.
Download ikpe mbipute nke Wondershare Dr.Fone maka iOS n'okpuru nwere a na-agbalị for free ugbu a.
Olee otú Naghachi ehichapụ Foto dị Ozi si iPhone